हेर्नुहोस ‘उल्टो घुँडा चिर्ने’ डाक्टरद्वय, भने, ‘बिरामी होशमा आएपछि मात्र चाल पायौं’! - Enepali Online
हेर्नुहोस ‘उल्टो घुँडा चिर्ने’ डाक्टरद्वय, भने, ‘बिरामी होशमा आएपछि मात्र चाल पायौं’!
काठमाण्डौं, १५ फागुन : एउटा घुँडको उपचारका लागि आएकी बिरामीको अर्को घुँडा चिरेर विवादमा आएका काठमाण्डौं थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालका डाक्टरले मंगलबार मेडिकल काउन्सिलमा बयान दिएका छन् ।
भरतपुरकी बिन्दु पौडेलको शल्यक्रियाका सम्बन्धमा थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालका दुई चिकित्सकले मंगलबार मेडिकल काउन्सिलमा लिखित बयान दिएका हुन् । शल्यक्रियामा संलग्न डा. प्रवीण नेपाल र डा. शैलेज रञ्जितकारले काउन्सिल गएर लिखित जवाफ दिएका हुन्् । चिकित्सकले बयानमा बिरामीको बायाँ घुँडामा भन्दा दायाँ घुँडामा बढी समस्या देखिएकाले दायाँ घुँडाको शल्यक्रिया गरेको जवाफ दिएका छन् । ‘शल्यक्रियाको समयमा बिरामीलाई बेहोस बनाइन्छ । हामीले दायाँ घुँडामा बढी समस्या देखेर त्यसकै अपरेशन ग¥यौ । बिरामी होशमा आएपछि मात्र थाहा भयो, बिरामीको बायाँमा समस्या भएको रहेछ । हामीले आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छौं’–जवाफमा भनिएको छ । काउन्सिलमा आइतबार बसेको इथिकल कमिटीको बैठकले नर्भिक अस्पतालका दुई चिकित्सकलाई मंगलबार बयानका लागि बोलाएको थियो ।
चिकित्सकद्वयको बयान उद्धृत गर्दै मेडिकल काउन्सिल इथिकल कमिटीका सदस्य डा. डुन्डीराज पौडेलले भने, ‘बयानले बिरामीसँग चिकित्सकको समन्वय नभएको देखिएको छ ।’ उनले थपे, ‘घटनाको विषयमा काउन्सिलले विज्ञहरुसँग गहन रुपमा छलफल गर्छ । यसमा भएका प्राविधिक त्रुटि पनि हेर्छौं ।’ चितवन भरतपुर महानगरपालिका–८ की ३८ वर्षीय बिन्दु पौडेलको बायाँ घुँडाको लिगामेन्ट च्यातिएकोमा चिकित्सकले दायाँ घुँडाको शल्यक्रिया गरेका थिए । अस्पतालले गम्भीर लापवार्ही गरेको भन्दै बिरामीका आफन्तले आपत्ति जनाएपछि चिकित्सकले गल्ती स्वीकार गरेका थिए । अस्पतालले बिरामीका आफन्तसँग सहमति समेत गरिसकेको छ । बिरामी पौडेलको दुवै खुट्टाको निःशुल्क उपचार गर्ने, उपचारमा लागेको खर्च मिनाहा गर्ने, विज्ञ चिकित्सकका आधारमा सबै उपचार अस्पतालले गरी दिनेलगायत सहमति बिरामीका आफन्तसँग भएको छ ।
पटक–पटक बिरामीमाथि लापर्वाही गर्ने गरेको आरोप झेल्दै आएको चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको नर्भिक अस्पतालको फेरि अर्को लापर्वाही सार्वजनिक भएको यो अर्को घटना हो । देब्रे घुँडाको उपचारका लागि आएकी युवतीको डाक्टरले दाँहिने घुँडा चिरेको घटना बाहिर आएपछि अस्पतालका डाक्टरको योग्यता र लापर्वाही मात्र खुलासा भएको छैन, अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको ‘चौधरी ग्रुप’ को ब्राण्ड नै बद्नामीमा परेको छ । नर्भिकका डाक्टरको उपचार अहिले ‘टाउकोमा लगाउनु पर्ने दवाई, नाइटोमा लाई’ भन्ने उखान जस्तै बनेको छ ।
चितवनकी ३८ वर्षीया विन्दु पौडेल लिगामेन्ट च्यातिएका कारण उपचार गर्न नर्भिक आएकी थिइन् । चितवनमा देखाउँदा अपरेसन गर्नुपर्छ भनेपछि परिवारका सदस्य एमआरआईको रिपोर्ट बोकेर नर्भिक अस्पताल आएका थिए । रिपोर्ट हेरेपछि डा. प्रविण नेपालले भ्याङ रहेको भन्दै अपरेशन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विन्दु बिहीबार काठमाण्डौं आइन् र विमानस्थलबाट सिधै अपस्ताल पुगिन् । आफैं हिडेर अस्पताल गएकी विन्दुलाई डा. नेपालले अपरेशन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले त हिंडेरै आएको छ ।
तत्काल अपरेशन नगर्दा हुन्छ होला भन्यौ, विन्दुका श्रीमान किशोर पौडेलले भने, ‘डाक्टरले तत्काल गर्नुपर्छ पछि समस्या हुन्छ भनेर डर देखाए ।’ उसो त अपरेशन गर्नुअघि परिवारका सदस्यले फेरि एमआरआई गरौं नभनेका पनि होइन । तर, डा. नेपालले पटक–पटक एमआरआई नगरौं आरसस्टोपी गरेर हेर्छु भने । परीक्षणपछि विरामी भर्ना भइनन्, घर नै गइन् । शुक्रबार विहान करीव साढे ९ बजेतिर अस्पताल भर्ना भइन् र अपरेशन गरियो ।
उनलाई अपरेशन कक्षमा झण्डै चार घण्टा राखिएको आफन्त बताउँछन् । अपरेशन लगतै भेट्न दिइएन, जुन स्वभाविक हो । तर, कस्तो छ भन्दा डाक्टरले राम्रो भएको सुनाए । जब आफन्तले भेट्न पाए, विरामीले अपरेशन गरेको खुट्टा देखाउँदा परिवारका सदस्यहरु छाँगाबाट खसेझै भए । नहुन पनि किन ? देब्रे घुँडाको लिगेमन्ट च्यातिएको भनेर अपरेशन गर्न पठाएको डाक्टरले त दाहिनेमा चिरेछन् ।
त्यसबेलासम्म अस्पतालले केही भनेको थिएन । पीडित परिवार डाक्टर प्रविणलाई भेट्न पुगे । उनी भेटिएनन् । लगतै उनीहरु कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहकहाँ पुगे र उपचारका क्रममा भएको लापर्वाही सुनाए । विरामीका आफन्तका अनुसार शुरुमा त चिकित्सकले गल्ती स्वीकार गर्न मानेनन् । डा. प्रविण नेपालको तर्क थियो, अपरेशन रुममा गएर हेर्दा देब्रेभन्दा दाहिनेमा धेरै समस्या देखें, त्यसैले त्यसकै अपरेशन गरें ।’ तर, विरामीका आफन्तले यो मान्ने कुरा थिएन । दाहिने खुट्टाको अपरेशन गर्नु पूर्व आफूलाई जानकारी नदिएको मात्र होइन, कुन परीक्षणका आधारमा अपरेशन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गरे । छलफलका क्रममा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सिंहले पनि डाक्टर नेपालको तर्कसँग सहमत भएनन् ।
तर, अन्तिममा डा. नेपालले देब्रे सोचेर अपरेशन गरेको दाहिने परेछ भने भन्दै गल्ती स्वीकार गरेका छन् । आज चौधरी अस्पताल सञ्चालक चौधरी ग्रुपको अस्पताल प्रशासनले डाक्टरको लापर्वाही लुकाउन हतपत पीडितहरुसँग चारबुंदे सहमति गरेको छ । सहमतिमा प्रविण नेपाल र शैलेज रञ्जितकारले ‘भूलवश मानवीय त्रुटीका कारण दाहिने घुँडाको अपरेशन हुन गएको उल्लेख गरेका छन् । सहमतिको बुंदामा विन्दुको दुबै खुट्टाको निःशुल्क उपचार गर्ने, त्यहाँ उपचार सम्भव नभए विज्ञ चिकित्सकका आधारमा सम्पूर्ण उपचार अस्पतालले गर्ने जनाइएको छ । साथै विरामीको घुँडाको उपचार नेपालमा सम्भव नभई बाहिर लैजानु परेमा सम्पूर्ण उपचार खर्च अस्पतालले नै व्यहोर्ने सहमति छ ।
Previous Post Previous post: मनोज पुन : धम्कीको भरमा करोडौं उठाउँथे, तर खर्च मात्रै पाउँथे, यसरि खुल्यो यथार्थ प्रहरी चकित
Next Post Next post: काेरियन लाउरेकाे फुर्ति बिहेमा डिग्री पढेकी केटी सँगै पल्सर बाईक माग्याे
इस्लाममा यी ५ कामलाई ‘हराम’ मानिन्छ, मुस्लिम देशमा भुलेर पनि नगर्नुहोला
वाम गठबन्धनले जित्दा भारतीय मिडियामा छट्पटी– ‘चीन र पाकिस्तान पछि नेपाल बन्यो खतरा’
आजको राशिफल :बि.स.२०७४ फाल्गुन ०८ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०१८ फेब्रवरी २० तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ । हामी सबैको दिन शुभ रहोस्
Enepali Online February 20, 2018 0